नेपालमा कोभिड खोप परीक्षण गर्ने तयारी « News of Nepal
त्रिवि शिक्षण अस्पताल र धुलिखेल अस्पताल प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाँदै
डा. राजीव श्रेष्ठ, काठमाडौं
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षण गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेल तयारीमा जुटेका छन् । खासगरी, विकासशील मुलुकहरुमा खोपको विकास गर्ने ग्लोबल अलायन्स (गाभी)लाई इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट (आईभीआई) कोरियाली कम्पनीले मद्दत गर्छ ।
यसले विश्व स्वास्थ्य संगठनकै लागि काम गर्ने हो । भ्याक्सिन प्रभावकारी छ भन्ने देखाइसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकलाई वितरण गर्छ । परीक्षण गर्न लागिएको भ्याक्सिन अस्ट्रेलिया र चाइनाको सहकार्यमा बनेको क्लोभर कम्पनीले बनाएको भ्याक्सिन हो । यो अरु देशमा पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।
फाइजर, मोडेना भ्याक्सिन नेपालमा आइपुग्न अझै एकदेखि डेढ वर्ष लाग्छ । त्यतिबेलासम्म कुर्नुभन्दा त यसलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा राखियो भने यो भ्याक्सिन चाँडै आउन सक्छ । हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका जनताले पनि चाँडै भ्याक्सिन पाऊन् भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्य उद्देश्य हो ।
प्रिक्लिनिकल स्टडी जनावरहरुमा गरिन्छ । प्रिक्लिनिकल, फ्रेज वन, फ्रेज टु भनेर परीक्षण भइसकेर यो फ्रेज थ्री ट्रायलमा आएको हो । फ्रेज थ्री ट्रायलमा भ्याक्सिन कत्तिको प्रभावकारी छ भनेर हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्रभाव हेर्ने परीक्षण भएको छैन र यो पनि असर तथा प्रभाव हेर्ने परीक्षण होइन ।
यो कत्तिको उपयोगी छ भनेर हेर्नका लागि परीक्षण गरिने हो । कुल ३४ हजारमा गरिने परीक्षणमा नेपालले १ हजार ८ सयलाई मात्र परीक्षण गर्दछ । यस्तो परीक्षण अरु मुलुकमा पनि गरिँदै छ । बहुमुलुक परीक्षण प्रक्रियामा नेपाललाई पनि पहिला राम्रो काम गरेकोले छानेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन प्रक्रिया सफल बनाउन सघायौं भने हामीले मुलुकका लागि पहिचान हासिल गर्नसक्छौं । भ्याक्सिन दिएपछि मान्छेमा विकास गर्नुपर्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एन्टीबडिजहरु जुन प्रक्रियाबाट निस्कनुपर्ने हो कति प्रभावकारीरुपमा निस्कियो भनेर हेरिन्छ ।
त्यस प्रकारको एन्टीबडी निस्केपछि हामी कोभिडबाट कति सुरक्षित हुन्छौं भन्ने अध्ययन–अनुसन्धान गर्न खोजिएको हो ।
खोप परीक्षणका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को इथिकल बोर्डबाट गत शुक्रबार पास गरिसकिएको छ । अहिलेको नयाँ अध्यादेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पास हुनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागको समेत संयोजनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । छिटो बाटोबाट चाँडै भ्याक्सिन पाइयो भने हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि राम्रो हो । फाइजर, मोडेना भ्याक्सिन नेपालमा आइपुग्न अझै एकदेखि डेढ वर्ष लाग्छ ।
त्यतिबेलासम्म कुर्नुभन्दा त यसलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा राखियो भने यो भ्याक्सिन चाँडै आउन सक्छ । हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका जनताले पनि चाँडै भ्याक्सिन पाऊन् भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्य उद्देश्य हो । यसको फलोअप अवधि कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ । कुनै औषधीले कसैलाई ठीक गरिराखेको हुन्छ, कसैलाई गर्दैन । यसका विभिन्न पाटाहरु हेर्नका लागि पनि एक वर्षसम्म फलोअप गर्नुपर्छ । यसको पूरै अध्ययन सकिनका लागि १६ महिना लाग्छ । यो खोप पनि दुई डोज नै लिनुपर्छ ।
यसबीच सरकारले भ्याक्सिन आउँछ भनेको छ । मलगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पदाधिकारीसहितको समिति बनेको छ । यो समितिले भनिरहेको छ अबको ६ देखि ७ महिनासम्म भ्याक्सिन आउँछ भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन । किनभने हामी प्राथमिकतामा कतिमा छौं र भ्याक्सिन कत्तिको मात्रामा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । अर्को कुरा यस परीक्षणमा सहभागी भएका नाताले मुलुकले चाँडै भ्याक्नि पाउँछ ।
एउटा मात्र कम्पनीले विश्वभरि भ्याक्सिन पु-याउन सक्दैन । त्यसैले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८ देखि १० वटा कम्पनीको भ्याक्सिनहरु लिन्छौं भनेको छ । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूचीकृत गरेको भ्याक्सिन हो । यो सकेसम्म चाँडो ट्रायल भयो र परिणाम राम्रो निस्कियो भने १६ महिना नकुरीकनै आकस्मिक स्वीकृति आएपछि खोप लगाउन शुरु हुन्छ ।
यो भ्याक्सिन स्वस्थ व्यक्तिमा दिएर एन्टीबडीहरु निस्कन्छ कि निस्कँदैन भनेर हेर्ने हो । यो पोलियो, टिटानसको इन्जेक्सन दिनेजस्तै हो । व्यक्तिमा एन्टीबडी विकास भयो कि भएन भनेर एक वर्षसम्म पाँचपटक अनुगमन हुन्छ, कतिसम्म एन्टीबडी बन्यो भनेर हेरिन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले क्लिनिकल एन्ड भ्याक्सिन ट्रायल टाक्सफोर्स गठन गरेको छ । त्यसमा म सदस्य सचिव छु । भ्याक्सिन ट्रायलमा धुलिखेल अस्पतालबाट अनुसन्धानकर्तामा म र डा. दीपेश ताम्राकार छौँ । इस्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगन्ज क्याम्पसबाट आईओएमका डिन प्रा.डा. दिव्या सिंह शाह र प्रा.डा. लक्ष्मण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । धुलिखेल अस्पतालमा हाम्रो छुट्टै टिम छ, त्यसमा डा. राम गुरुङ, डा. राजेन्द्र ताम्राकार, डा.निरीश वैद्य हुनुहुन्छ ।
उहाँहरुले विशेष गरी बिरामी व्यवस्थापन हेर्नुहुन्छ । मैले भ्याक्सिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पक्ष हेर्छु । अन्त्यमा, यसमा नराम्रो प्रभाव कुनै पनि हुँदैन ।
अहिले फाइजरलगायतका कम्पनीको भ्याक्सिन दिएकोमा पनि अलि अलि त साइड इफेक्ट देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा सिटामोल खाँदा पनि कतिको लिभर फेलियर भएको छ भने कति जनालाई एन्टिबायोटिक खाँदा पनि साइड इफेक्ट हुन्छ । तर परीक्षणमा लिइएका व्यक्तिहरु हाम्रो सुरक्षा निगरानीमा रहने भएकाले कसैले कत्ति पनि डराउनुपर्दैन ।
प्रस्तुति : भगवती तिमल्सिना
शिक्षामा लगानीअनुरुपको प्रतिफल हासिल हुनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी
अदालतको अवहेलना गरेको छैन : अध्यक्ष
प्रधानमन्त्रीले पोखरा रङ्गशालाको निरीक्षण गर्ने
आज थप ७८ जनामा कोरोना पुष्टि
विप्लव समूहको समस्या वार्ताद्वारा छिट्टै समाधान
अदालतको अवहेलना गरेको छैन : अध्यक्ष..
विप्लव समूहको समस्या वार्ताद्वारा छिट्टै समाधान..
पाँचखाल नगरपालिकाको आठौँ नगर सभा सम्पन्न : स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा ऋणात्मक बजेट
माल्दिभ्समा एक लाख व्यक्तिलाई कोरोनाविरूद्धको खोप दिइयो